Muxuu ka yiri Zidane guuldarradii xanuunka badneyd ee xalay ka soo gaartay Real Sociedad? – Gool FM
Muxuu ka yiri Zidane guuldarradii xanuunka badneyd ee xalay ka soo gaartay Real Sociedad?
Dajiye February 7, 2020
(Madrid) 07 Feb 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ku tilmaamay guuldarradii ka soo gaartay naadiga Real Sociedad in ay tahay mid aad u xanuun badan.
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa tartanka Copa Del Rey looga reebay garoonkeeda Bernabeu kulan 7 gool la iska dhaliyey, iyadoo Real Sociedad ay iska xaadirisay afar dhammaadka tartankan.
Los Blancos ayaa ku hartay wareegga siddeed dhammaadka Copa Del Rey kaddib markii ay guuldarro 4-3 kala kulmeen kooxda Real Sociedad oo marti ugu aheyd garoonka Santiago Bernabéu.
Haddaba Zinedine Zidane ayaa kaddib marka ay soo idlaatay ciyaarta wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri:
“Waxay aheyd guuldarro weyn, xanuun daran ayaan dareemeynaa, waa inaan runta sheegnaa”.
“Marka aan dooranayo safka koowaad ee ciyaarta, waxaan xulanayaa 11 ciyaartoy maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inay sifiican u ciyaari doonaan, wey fududahay inaad go’aamo gaartaan ciyaarta kaddib”.
“Inay naga dhashaan 4 gool ma ahan oo kaliya qaladka daafacyada, laakiin waa qaladka iyo mas’uuliyada dhamaan ciyaartooyda”.
“Qeybtii labaad way ka fiicneyd sidii hore waxaan sameynay isku dayo xitaa markii natiijadu aheyd 1-4, Real Sociedad waxay ciyaartay kulan weyn, in badan ayaana ku hor dhibtoonay qeybta hore, marka loo fiiriyo heerka cadaadiska, waxaa sidoo kale jiray qaladaad dhanka daafaca ah”.
Intaas kaddib Zinedine Zidane ayaa la weydiiyay su’aal ku aadaneyd nasiib xumida xilli kasta ka heysata tartanka Copa del Rey wuxuuna ku jawaabay:
“Tani waa kubadda cagta, waxaan ku guuldarreysanay ciyaarta, arrintana waa ay dhamaatay, waa inaan ka fikirnaa horyaalka La Liga, caawa lama mid aheyn habeenkii Leganes, xaaladdu way ka duwaneyd”.
“Guuldarradan waxba ma badali doonto, waxaanan sii wadi doonnaa shaqadeena, waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo taageerayaasha Santiago Bernabeu taageeradooda joogtada ah inta ciyaarta ay socotay”.
Inter Milan oo wax walwal ah ka baqin xiisaha Barcelona ee Lautaro Martinez
Madaxweynaha Barcelona oo ka hadlay guuldarradii ay xalay kala kulmeen kooxda Athletic Bilbao